The Monkey and The Crocodile(बाँदर र गोही) - Nepali Me
The Monkey and The Crocodile(बाँदर र गोही)
LeaveaComment / September 7, 2021 November 3, 2021
एकादेशमा एउटा पोखरी थियो र त्यो पोखरीको छेउंमा एउटा जामुन फलको रुख थियो। त्यो रुखमा एउटा बाँदर बस्थ्यो । उसले हरेक दिन मीठो जामुन टिप्दै खान्थ्यो ।
एक पटक, उसले त्यो पोखरीमा एउटा गोहीलाई आराम गरेको देख्यो जो थकित र भोको देखिन्थ्यो । उनलाई त्यो गोही देखेर माया लाग्यो र केहि जामुन टिपेर खान दियो ।
गोहीले जामुन खायो र उसलाई जामुन निकै स्वादिस्ट लाग्यो र उसले बाँदरलाई धन्यवाद दियो । दिन बित्दै गयो र उनीहरु एकदमै मिल्ने राम्रो साथी बने ।
गोहीले सधैं केहि जामुन बचाएर आफ्नो श्रीमती गोहीलाई पनि लगिदिन्थ्यो । श्रीमती गोहीलाई पनि त्यो जामुन निकै नै स्वादिस्ट लाग्यो । तर गोहीको श्रीमती दुष्ट गोही थिइन् ।
उनले आफ्नो श्रीमान गोहीलाई भनिन् : “त्यो बाँदरले दिएको जामुन त एस्तो स्वादिस्ट छ, उसको मुटु झन् कति स्वादिस्ट होला ? मलाई त्यो बाँदरको मुटु जसरी भएपनि खानु छ ।”
यो कुरा सुनेर, गोही सुरुमा रिसाएको थियो तर आफ्नी श्रीमतीको इच्छालाई नाइँ भन्न सकेन ।
भोलिपल्ट गोहिले बाँदरलाई गएर भन्यो: “बाँदर साथि, तिमि आज मसंगै घर जाम है । मेरी श्रीमतीले तिम्रो लागी निकै मिठो खाना बनाएर राखेको छ ।” बाँदर पनि साथीको घरको निम्तो पाउँदा खुसि भयो र जना तयार भयो ।
उनीहरु आधा बाटो पुगेका थिए र गफै गफको तालमा, गोहिले आफ्नो श्रीमतीको सबै योजना बताईदियो । यो कुरा सुनेर बाँदर झसंग भयो र अब कसरी यो गोही बाट बच्ने होला भनेर सोच्न थाले ।
बाँदर, चतुर भएकोले, उसले गोहीलाई भन्यो, “लौ जा, तपाईंको श्रीमतीलाई मेरो मुटु चाहेको रहेछ तर मैले त मुटु बिर्सेर जामुनको बोटमै पो छोडेर आए ।” मुर्ख गोहीले बाँदरको कुरा पत्ताएर बाँदरलाई त्येही जामुनको बोट भएको ठाउंमा फिर्ता लगे ।
जामुनको बोट देख्नी बितिकै बाँदर फुत्त उफ्रेर रुखमा चडीहाले । रुखमा पुगेसी बाँदरले गोहीलाई भन्यो, “कसले आफ्नो मुटु झिकेर अन्तै राख्न सक्छ र ? तिमीले मेरो विश्वासलाई धोका दियौ । हामी फेरि कहिल्यै साथी बन्न सक्दैनौं ।
त्यसपछी गोही सधैं एक्लो र भोको भयो ।
आफ्नो साथीलाई कहिले पनि धोका नदिनु।